Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Afgaanistaan » Daalibaan ayaa joojisay dhammaan duulimaadyadii ka imaan jiray garoonka diyaaradaha ee Kabul
Cutubyo ka tirsan Daalibaan ayaa si toos ah ugu dhowaa garoonka diyaaradaha waxayna rideen dhowr xabbadood oo digniin ah si ay u kala eryaan dadka halkaas ku qulqulay.
Taliban ayaa baajisay dhammaan ka bixitaankii garoonka diyaaradaha ee Kabul.
Madaarka Caalamiga ah ee Kabul “si ku -meel -gaadh ah ayaa loo hakiyay”.
Dhammaan duullimaadyada waxaa lagula taliyay in aysan ku dul duulin Afgaanistaan.
Wakiillada Daalibaan ayaa maanta ku dhawaaqay in ka bixitaankii dhammaan duullimaadyadii madaarka caalamiga ah ee Kabul “si ku -meel -gaar ah loo hakiyay” ilaa amar dambe.
Sida ay sheegayaan wararka maxalliga ah, cutubyo ka tirsan Daalibaan ayaa si toos ah ugu dhowaa garoonka diyaaradaha waxayna rideen dhowr xabbadood oo digniin ah si ay u kala eryaan dadka halkaas ku qulqulay.
Goor sii horreysay, dhammaan duullimaadyadii ganacsi ee ka iman lahaa garoonka diyaaradaha ee Kabul ayaa la baajiyay, halka dhammaan diyaaradihii sii gudbi lahaa lagu taliyay inay dib u leexdaan oo aysan ku dul duulin Afgaanistaan. Talaadadii, Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Britain Dominic Raab ayaa sheegay in xaaladda gegida dayuuradaha ay degan tahay.
On Ogosto 15, the Taliban u dhaqaaqay Kabul oo ay si buuxda gacanta ugu dhigtay magaalada saacado gudahood. Madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa xilka ka degay, sida uu hadalka u dhigay, si uu uga baaqsado dhiig daata, kana cararay dalka. Wadamada reer galbeedka ayaa daad gureynaya muwaadiniintooda iyo shaqaalaha safaarada.